Author Topic: Can only happen in Nepal (3.6 lakh pageviews) (Read 429065 times)
« Reply #140 on: August 07, 2009, 11:53:55 PM »
nepal lai politicians le bigaryo !!!
« Reply #141 on: August 10, 2009, 11:08:52 PM »
Quote from: ratamakai on August 07, 2009, 11:53:55 PM
What about kids safety...
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुरमा रहेको महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको शालिकमा चढी खेल्दै गरेका बालकहरु। तस्बिरः किरण पुन
« Reply #142 on: August 11, 2009, 10:32:22 PM »
दूतावासै छैन दूत छान्न हतार
यो अजब नेपालमा एउटा गजबको समाचार सुन्ने मौका पाइयो फेरि। भएछ के भने अस्ति नै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दुई देशका राजदूत नियुक्त गरेको रैछ। एक जना क्यानाडाका लागि अनि अर्का चैँ श्रीलंकाका लागि। श्रीलंका त दक्षिण एसिया कै देश भइहाल्यो, त्यहाँ त दूतावास पनि धेरै अघिदेखि छ। तर क्यानाडा भने अहिलेसम्म दूतावास नै छैन। दूतावास नै नभएको ठाउँमा पुराना मुख्य सचिव भोजराज घिमिरेलाई राजदूत बनाउने निर्णय ठोक्देछ मन्त्रिपरिषद्को बैठकले।
सोमबार तिनै राजदूतहरुको संसदीय सुनुवाई थियो। हैन यो दूतावास नै नभएको देशमा कसरी दूत नियुक्त गर्‍यो सरकारले हँ ? सरकारलाई कुन कुन देशमा दूतावास छ भन्ने कुरा पनि थाहा छैन कि क्या हो भन्दै सभासदहरु कुर्लिए। यसका कारण निर्धारित संसदीय सुनुवाई नै स्थगित हुन पुग्यो।
हुन पनि क्यानाडामा अहिले दूतावास छैन। कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको देश भएकोले हाल अमेरिका कै राजदूतले क्यानाडाको मामिला पनि हेर्ने गरिरहेका छन्।
दूतावास नै नभएको देशमा राजदूत नियुक्त गरेको विषयमा अब संसदीय समितिले सरकारसँग जानकारी लिने भएको छ। यो जानकारीपछि मात्रै साउन २८ गते सुनुवाई हुनेछ।
दूतावास नभएको देशमा राजदूत नियुक्त भएका भोजराज घिमिरेविरुद्ध दुई वटा उजुरी परेका छन्। श्रीलंकाका लागि राजदूत नियुक्त सुशीलचन्द्र अमात्यविरुद्ध भने कुनै उजुरी परेको छैन। अमात्य एमालेका तिनै समानुपातिकबाट निर्वाचित सदस्य हुन्, जसले माधव नेपालका लागि आफ्नो सभासद् पदबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यसो त त्यतिबेला संवैधानिक समितिको अध्यक्ष बनाउनका लागि भनी माधव नेपाललाई सभासद बनाइएको थियो। तर पुर्पुरो बलियो भएपछि माधव नेपाल प्रधानमन्त्री नै बने। अनि आफ्नो लागि ठाउँ बनाइदिने अमात्यको गुण सम्झेर पो हो कि उनलाई श्रीलंकाको राजदूत बनाइदिए नेपालले।
« Reply #143 on: August 12, 2009, 09:11:54 PM »
प्रधानमन्त्री र मन्त्री नै नक्कली नम्बरप्लेटका गाडीमा
बलाराम बानियाँ, काठमाडौं, साउन २८- मुलुकमा कानुनी शासन बहाली गराउनुपर्ने सर्वोच्च कार्यकारी दिनदिनै गैरकानुनी रूपमा नक्कली नम्बर प्लेटको जिपमा सवार हुन्छन् भने अरूको हालत के होला ? वास्तविकता ठीक यस्तै छ। प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल सवार हुने टोयोटा प्राडोको नम्बरप्लेट नै नक्कली हो। उनी बा १ झ १०३० नम्बरको जिप चढ्छन्। उनको त्यो नम्बरको जिप कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा दर्ता छैन।
गैरकानुनी रूपमा नक्कली नम्बरप्लेटको जिपमा सवार हुने प्रधानमन्त्री एक्ला होइनन्, ऊर्जामन्त्री प्रकाशशरण महतले समेत दिनहुँ नक्कली नम्बरप्लेटकै जिपमा सवार हुन्छन्। उनी बा १ झ १०२९ नम्बरको गाडी चढ्छन्। प्रधानमन्त्रीको जस्तै महतको गाडीसमेत कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा दर्ता छैन।
यो जापानी जिपको हालको बजार मूल्य १ करोड १० लाख छ। प्रधानमन्त्री नेपालले आफ‍नो बुलेटप्रुफ (गोलीसमेत छेक्ने) युक्त भीआईपी मर्सिडिज कार छाडेर नक्कली नम्बरप्लेटको जिप चढेका हुन्।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले चढ्ने गाडी अत्याधुनिक, सुविधासम्पन्न, आरमदायी हुन्छ भन्ने आमजनता अनुमान गर्छन्। तर, उनीहरूलाई प्रधानमन्त्री र मन्त्री नै कानुनकै उल्लंघन गरी नक्कली नम्बरप्लेटका गाडीमा सवार हुन्छन् भनेर पत्याउन गाह्रो हुन्छ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले नै कानुन उल्लंघन गर्दा जनतामा कानुन पालना नै गर्नुनपर्ने सन्देश जाने चिन्ता सरकारी अधिकारीहरू व्यक्त गर्छन्। सरकारी तथा निजी गाडी यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता गरिन्छ, तर प्रधानमन्त्रीको बा १ झ १०३० र ऊर्जामन्त्रीको बा १ झ १०२६ नम्बरका जिप दर्ता नै छैनन्। उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार बरु यी नम्बरमा सरकारका अरू नै दुई गाडी विधिवत दर्ता छन्। ती गाडी राजधानीका सडक र सरकारी कार्यालयमा कुदिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले चमेलिया विद्युत् आयोजनाका ठेकेदारका लागि ल्याइएका रातो प्लेटका गाडी जबर्जस्ती चढेका हुन्। यी गाडी चमेलियाकै ठेकेदारकै नाममा छन्। यी गाडीको वास्तविक नम्बरप्लेट अर्कै छ। प्रधानमन्त्रीको गाडीको वास्तविक नम्बर बा ६ च १०३० र ऊर्जा मन्त्रीको गाडीको बा ६ च १०२६ हो।
ठेकेदारको नाममा रहेका रातो प्लेटका निजी गाडीलाई विद्यमान कानुनअनुसार सरकारी नम्बरप्लेटको बनाउन नमिल्ने भएकाले नक्कली नम्बरप्लेट राखिएको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवालय उच्च स्रोतले दिएको छ।
आयोजना सम्पन्न नभएसम्म ती गाडी ठेकेदारकै नाममा रहन्छन्। आयोजना सकिएपछिमात्र ती गाडी सरकारी स्वामित्वको विद्युत् प्राधिकरणको नाममा नामसारी हुन्छन्।
सरकारी तथा निजी गाडीको दर्ता गर्ने सरकारी निकाय यातायात कार्यालयलाई न त प्रधानमन्त्री र ऊर्जा मन्त्रीको गाडीको नम्बरप्लेट नक्कली छ भन्ने नै थाहा छ, न त दुवै जनाको गाडीको नम्बर आफ्नो कार्यालयमा दर्ता भएका अरू गाडीसँग ठ्याक्कै मिल्छ भन्ने नै थाहा छ।
सरकारले चमेलियाको अर्को गाडी राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई समेत उपलब्ध गराएका छन्। उनको गाडीको नम्बरप्लेट भने परिवर्तन गरिएको छैन। 'राष्ट्रपति अनौपचारिक कार्यक्रममा जाँदा यही गाडी चढ्नुहुन्छ, तर गाडीको नम्बरप्लेट रातै छ।
स्रोतका अनुसार नम्बरप्लेट नक्कली भएकाले प्रधानमन्त्री र ऊर्जा मन्त्रीका गाडीले रातमा कसैलाई ठक्कर दिएर या किचेर मृत्यु या अंगभंग भएमा अर्कै गाडीका चालक कारबाहीमा पर्ने खतरा छ।
'प्रधानमन्त्री र ऊर्जा मन्त्रीको गाडीले अाध्यारामा ठक्कर दिंदा कोही मर्‍यो या घाइते भयो र ट्राफिक या अरू कसैले दुर्घटना देख्यो र अध्यारामा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको गाडीको नम्बरप्लेटको रातोनीलो याद गरेन, नम्बरमात्र थाहा पायो भने त्यो नम्बरको गाडी खोज्दै जाँदा अर्कै गाडीका चालक कारबाहीमा पर्छन्। किनकि यातायात कार्यालयमा ती नम्बरको अर्कै गाडी यातायात कार्यालयमा दर्ता छन्, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको होइन।'
सरकारी अधिकारीलाई गाडीको व्यवस्था गर्ने गृह मन्त्रालयका अधिकारीसित प्रधानमन्त्री र ऊर्जा मन्त्रीको गाडीका बारेमा जिज्ञासा राख्दा आफूलाई केही जानकारी नभएको बताए।
'हामी गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सरकारी अधिकारीलाई दिइने गाडीमात्र हेर्छौं। उनीहरूले आयोजना या अन्यत्रबाट ल्याएर चढ्ने गाडीको व्यवस्थापन हामीले गर्दैनौं' नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा ती अधिकारीले भने।
स्रोतका अनुसार संसारभर जुनसुकै मुलुकका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले कार चढ्छन्। मन्त्रीको इज्जत कार चढ्दा बढ्छ, जिप चढ्दा हुँदैन। संसारभर कार बढी प्रतिष्ठायुक्त वाहन हो। कार छोटो दुरीका लागि हो। जिप लामो रुटका लागिमात्र उपयुक्त हो। तर, नेपालमा कारभन्दा जिपलाई बढी प्रतिष्ठायुक्त मानिन्छ। त्यही भएर मन्त्रीहरू जबर्जस्ती आयोजना र परियोजनाका जिप मगाएर चढ्ने गर्छन्।
'यदि सुनमा नै खिया लाग्छ भने फलामको हालत के होला ? चर्चका पादरी नै खराब छन् भने अरूको स्थिति के होला ?' अंग्रेजी कवि जोफ्रे चसरको कविताका यी दुई हरफसित प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको व्यवहार ठ्याक्कै नमिलोस्' भन्ने सरकारी अधिकारीको कामना छ।
« Reply #144 on: August 13, 2009, 08:15:26 AM »
« Reply #145 on: August 13, 2009, 08:16:29 AM »
People pullingavehicle stuck along sideariver at Juniya VDC in Gulmi district.
(Photo: Ghanshyam Gautam)
« Reply #146 on: August 14, 2009, 12:00:47 AM »
Mobile Maoist Mansion: Seen in the photo is the inside of the trolley bus used asatrailer by the activists of the Unified CPN (Maoist) at the Trolley Bus Office in Minbhawan, KTM.
(Photo: Laxmi Pd. Ngakhusi)
« Reply #147 on: August 14, 2009, 09:21:57 AM »
हजारका त्रूटिपूर्ण नोट बजारमा
काठमाडौ, साउन ३० (नागरिक)- गभर्नर विजयनाथ भट्टराईको हस्ताक्षर भएका हजार दरका अवैध नोट बजारमा चल्तीमा गएको भेटिएपछि राष्ट्र बैंकले छानबिन सुरु गरेको छ।
राजाको स्थानमा सगरमाथा र पानीछापमा देखिने श्रीपेच ढाक्न लालीगुराँसको चित्र भएका हजारका नोटमा तत्कालीन कायममुकायम गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धरले मात्र हस्ताक्षर गरेका छन्। तर, बजारमा प्रचलनमा रहेका केही नोटमा भट्टराईको हस्ताक्षर फेला परेका छन्। गल्तीले प्रचलनमा गएका हजार रुपैयाँका नोट संकलकले फेला पारेपछि मात्र राष्ट्र बैंकको जानकारीमा आएको थियो।
यस्ता गैरकानुनी नोट फेला परेपछि छानबिन गर्न गभर्नरले आन्तरिक लेखा परीक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक भोलाराम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका छन्। त्रुटिपूर्ण नोट कसरी बाहिर गए भन्नेबारे अनुसन्धान गरी समितिले केही दिनभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। राष्ट्र बैंकभित्र आएका यस्ता नोट पुनः चलनमा जान दिइएको छैन।
कति संख्यामा यस्ता त्रुटिपूर्ण नोट बजारमा पुगे भन्ने यकिन भएको छैन। 'समितिको छानबिनपछि मात्र थाहा हुन्छ,' उच्च स्रोतले भन्यो। राष्ट्र बैंक स्रोतले एक हजार ८ थानमात्र यस्तो नोट प्रचलनमा गएको दाबी गरेको छ। यसमध्ये १ सय ९ थान नोट राष्ट्र बैंकमा फिर्ता आएको छ।
गभर्नर भट्टराई भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बन भएपछि तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् बैठकले नोट अभाव हुन नदिन कायममुकायम गभर्नरलाई हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको थियो। यही आधारमा कामु गभर्नरको हस्ताक्षरमा नयाँ हजारका नोट बजारमा आएका थिए। अहिलेसम्म प्रचलनमा रहेका राजाको तस्बिर हटाइएका हजारका नोटमा कामु गभर्नरको मात्र हस्ताक्षर छ।
नोट छाप्ने इन्डोनेसियाको सरकारी स्वामित्वको कम्पनी पेरङ पेरीले पनि गल्ती भएको स्वीकार गरेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दियो। 'गल्ती भएको स्वीकार गरी कम्पनीले कसरी यस्तो भयो आन्तरिक छानबिन गरिएको जानकारी हामीलाई दिएको छ,' राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले भन्यो। छानबिनको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई पनि दिने कम्पनीले जानकारी गराएको छ।
राष्ट्र बैंकले यो गल्तीलाई गम्भीर रुपमा लिएको छ। नोट शतप्रतिशत सही हुनु पर्छ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो 'यो ऐतिहासिक गल्ति हो।
छानबिन समितिको प्रतिवेदन हेरेपछि मात्र छाप्ने कम्पनीलाई कस्तो कारवाही गर्ने यो पनि तय हुने छ। 'अहिले के आधारमा कारवाही गर्ने ?' स्रोतले भन्यो कति संख्यामा प्रचलनमा आएको छ त्यो हेरेपछि मात्र थाहा हुन्छ।' कम्पनी पनि त्रुटिपूर्ण नोटको सट्टामा अरु नयाँ नोट दिन तयार भएको छ स्रोतको दावी छ। कानुन अनुसार त्रुटिपूर्ण नोटभेटिए कम्पनीले शोधभर्ना गर्नु पर्ने प्रावधान छ। समितिको प्रतिवेदनका आधारमा राष्ट्र बैंक संचालक समितिले कारवाहीको अन्तिम निर्णय गर्ने छ।
कामु गभर्नरको हस्ताक्षरमा पछिल्लो ५५ ख लटका नोटमा गल्ती भएको शंका गरिएको छ। 'यो झनै गम्भीर विषय हो' स्रोतले भन्यो।
नोट छाप्नुअघि विभिन्न चरणपार गर्नु पर्छ। सुरुमा केही प्रति नोट छापेपछि प्रुफ ठिक भए/नभएको हेर्न छाप्ने कम्पनीले केहीप्रति राष्ट्र बैंक पठाउँछ। यो क्रम केहीपटक भइरहन्छ। हजारका नयाँ नोट छाप्ने अन्तिम स्वीकृतिका लागि कम्पनीले पठाएको बेला भट्टराई गभर्नर थिए। उनको हस्ताक्षर धमिलो भएको हुँदा पुनः नयाँ बनाएर ल्याउन कम्पनीलाई भनिएको थियो। यही बीचमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अदालतमा मुद्दा दायर गरेकाले भट्टराई निलम्बनमा परे। उनको हस्ताक्षरमा आउन लागेको नोट पनि रोकियो। पछि भट्टराईको सट्टा कामु गभर्नरको हस्ताक्षरमा नयाँ नोट छाप्न दिई चलनमा ल्याइयो।
कम्पनीले अन्तिम स्वीकृतिका लागि पठाउँदै केही थान नोट छापिइसकेको र यही नोट गल्तीले बजारमा आएको हुनसक्ने अनुमान राष्ट्र बैंक अधिकारीको छ।
'नयाँ कामु गभर्नरको हस्ताक्षर जानुभन्दा अघि नै अन्तिम स्वीकृति लिने क्रममा छापिएका नोट नै आएको हुन सक्छ,' ती अधिकारीले भने। राष्ट्र बैंकले बजारमा जानुअघि नोटमा गल्ती छ वा छैन भनी हेर्दैन। नोट छाप्ने कम्पनीले पनि कसैले नियतवस यस्ता नोट पठाइदिएको हो कि भन्ने आशंका गरेको स्रोतले जनाएको छ। सुरुमा ५/६ थान नोटमा त्रुटि भेटिएपछि छाप्ने कम्पनीले प्रति नोट २८ हजारमा किनेको थियो स्रोतले जनायो। 'यस्ता नोट धेरै देखिएपछि कम्पनीले पनि किन्न छाड्यो।
« Reply #148 on: August 15, 2009, 10:13:16 AM »
Truly can only happen in Nepal incident!! ...... Guess what?
« Reply #149 on: August 15, 2009, 11:41:09 AM »
Quote from: kurakani on August 15, 2009, 10:13:16 AM
yo chai k ho?